Yaa dhagaysta taleefoonada Trump? | Biyoguurenews.com
Home Wararka Yaa dhagaysta taleefoonada Trump?
Cabasho ka timid qof seeri-afuuf ah oo muujinaysay in diiwaanka taleefoonada uu diro madaxweynaha Maraykanka loo maamulay hab sir ku dahaarantahay ayaa toosh weyn ku ifisay sida loo maareeyo wicitaanadaas iyo sida loo qarin karo.
Ninka warka sheegay oo ah nin ka shaqeeya sirdoonka Maraykanka ayaa aaminsan in wicitaan taleefoon oo dhexmaray madaxweyne Trump iyo madaxwenaha Ukraine Enrique Pena Nieto loo qariyay sababo siyaasadeed awgood.
Qoraalka wixii la isku yiri wicitaanka ayaa lagu asteeyay “sir xasaasi ah”, waxaana loo ogolaaday in dad khaas ah oo kaliya ay arki karaan.
Tan ayaa dhalisay shaki hor leh, waxaana la dareemay in saraakiisha Aqalka Cad ay ka war hayeen waxa la’isku yiri wicitaanka, islamarkaasna ay doonayeen in ay ka qariyaan mas’uuliyiinta dowladda ee kale.
Dadka Trump kasoo horjeeda ayaa sheegay in wicitaanka uu ahaa mid Trump uu madaxweynaha Ukrain ugu qancinayay in uu baaritaan ku furo madaxweyne ku xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden oo Trump xilka kula loolamaya, si fursadaha madaxweyne Trump ee dib usoo doorashadiisa sare ugu kacaan.
Madaxweyne Trump iyo kaaliyeyaashiisa ayaa beeniyay in xogta wicitaaka loo qariyay sababo siyaasad la xiriirta, balse ay kaliya tahay wax quseeya amniga qaranka.
Haddaba yaa dhagaysta wicitaanada madaxweynaha?
Caadi ahaan saraakiisha sirdoonka qaranka ayaa madaxweynaha warbixin siiya ka hor inta uusan dirin taleefoonka, waa haddii uu la hadlayo hoggaamiye shisheeye ah, kadibna labo qof oo sirdoonka ka mid ah ayaa xafiiska Oval la fariista oo dhagaysta marka uu taleefoonka ku hadlayo.
Dad kale ayaa qol kale oo Aqalka Cad ka tirsan ka dhagaysanaya taleefoonka madaxweynaha, kadibna qoraallo ayay ka samaynayaan waxa la’is dhahayo.
Sidoo kale kumbuyuutarro ayaa qoraya hadalka madaxweynaha, kadibna waxaa la’is barbardhigayaa qoraalkii dadka ay qoreen iyo kii uu qalabka qorey, sida uu sharaxay qof horey uga shaqayn jirey Aqaka Cad.
Wadasheekeysigan uu Trump khadla telefoonka kula yeeshay madaxweynaha Ukrain ayaa la sheegay in ay dad koox ah dhagaysanayeen, hase yeeshee waxaa la sheegay in tan iyo intii uu Trump qabtay xilka, in warbixinta la siiyo ka hor wicitaanka ay ahayd mid degdeg ah, islamarkaasna ay wax badan qaldanyihiin.
Dariiqee loo maraa haddii ay tahay in “sir xasaasi ah” lagu asteeyo qoraalka wicitaanka madaxweynaha?
Saraakiisha sirdoonka ayaa go’aansada heerarka xog-qarinta ee wicitaanada madaxweynaha.
Tusaale ahaan, haddii xogta ay tahay mid dhaawici karta amniga Qaranka ama halis galin karta nafta dadka qaar, markaas waxaa lagu asteeyaa “Sir Sare”, waxaana lagu kaydiyaa meel aanan la arki karin.
Nin lagu magacaabo Andrew Miller oo xiligii Barack Obama ka shaqayn jiray arrimahan, ayaa qaba in wicitaanka dhexmaray Trump iyo Madaxweynaha Ukraine aysan ka dhalan karin sabab loo qariyo wixii ay ku wada hadleen.
Maxaa dhacaya haddii qoraal lagu asteeyo ‘sir sare’?
Waxa ay ka dhigantahay in dadka sarsare ee haysta ansixinta amni ee ugu sareeya Maraykanka ay arki karaan xogtaas.
Waxaa la’isugu gudbiyaa hab sir ah oo aad u xadidan, kaas oo ay kaliya galaangal u leeyihiin dadka caynkan ah.
Dad badan oo naqdiya madaxweynaha ayaa qaba in waxa dhacay ee lagu qariyay xogta wicitaanka ay ahayd ku tagri fal awoodeed.
Previous articleThe East African: Uhuru oo Soomaaliya kala kulmaya madax-xanuun la mid ah midkii ay aabihii ku haysay
Next articleEx Madaxwayne Dahir rayaale, Xisbiyadu Qabyaalada ha Joojaan o Xisbinimo wax haku doonaan